မမရယ်… – Grab Love Story
မိုးထက် မမကြည်ဝယ်ပေးထားသော ၀တ်စုံအသစ်လေးကို ရေမိုးချိုးပြင်ဆင်ပြီးဝတ်လိုက်လေသည်။ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ချစ်သူနဲ့ အပျက်ကဲကြတော့မည်ပေါ့။ ရွာ့အနောက်ဘက်ကမ်း ကမ်းပါးတွင်ပေါက် နေသော နန်းလုံးကြိုင်မြစ်နီနှင့် ဆန်ဆေးရေကို သွေးလူးထားသည်မို့ သူ့လိင်တံကြီးကား တင်းကားနေပြီး ထောင်မတ်နေသည်မှာ ဒုံးပျံကြီးအလား၊ ဒီလီးကြီးနဲ့ ချစ်သူစောက်ပတ်လေးပါကင်ဖွင့်ရတော့မည် ချစ်သူကတော့ ဘယ်လောက်တောင်အော်လိုက်မည်လည်းကို တွေးရင်းတွေးရင်း ဒစ်ဖူးကြီးက လီးရည်ကြည်များစိမ့်ထွက်နေသည်။
““ မောင်လေး နင်စောစောပြန်ခဲ့နော်….. အိမ်မှဘယ်သူမှရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတယောက်တည်းကြောက်တယ်”” ““ အင်းပါ….မမ ထက် သိပ်မကြာပါဘူး၊ အမြန်ပြန်ခဲ့ပါမယ် အစ်မ”” ကြည်ကြည် လူပျိုရိုင်းလေး အသက်(၂၀)အရွယ် မောင်လေးကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေမိသည်။ ဟိုဖက်ရွာက မိမိသူငယ်ချင်းယောင်းမလောင်းနဲ့သဘောကြနေသည်မို့ မောင်လေးကို မမကိုယ်တိုင် အောင်သွယ်ပေးခဲ့သည်။ မိုးထက်က (၁၀)တန်းဖြေရတော့မည် ကြည်ကြည်နှင့်ကေဇင်က ဒုတိယနှစ်ဖြေထားကြသည်။ ဒီကောင်မတော့ ဟင်း ဟင်း ငါ့မောင် ဒုတ်စာတော့မိပြီပေါ့ဟု ကြည်ကြည်ထွက် သွားသော မောင်လေးမိုးထက်ကိုကြည့်ကာတွေးလိုက်သည်။ ကြည်ကြည် ရေမိုးချိုးပြီး သနပ်ခါးလိမ်းရန် ကျောက်ပြင်နားထိုင်လိုက်တော့ စောစောတုန်းက မိုးထက် သွေးလူးခဲ့သော နန်းလုံးကြိုင်မြစ်နှင့်ဆန်ဆေးရေခွက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
အဲ့ဒါသွေးလူးတာနဲ့ ယောက်ကျားလေးတွေဟာက အတုတ်ကြီးဖြစ်လာတာဟဲ့ လို့ ကေဇင်ပြောသောစကားကို ပြန်ကြားယောင်မိလိုက်သည်။ ကြည်ကြည်သက်ပြင်းချရင်း “ အင်း….ခုလောက်ဆို မောင်လေးတော့ ဒီကောင် မ ရှင်ပြုပေးနေလောက်ပြီ” ဟု တွေးမိလိုက်သည်။ ကေဇင်မှာလည်း မိမိလို အပျိုစစ်စစ်ပင် အခင်းတောသွားတုန်းက သူ့ဟာလေးပြဖူးတာ ဖြူဖြူ မို့မို့လေး စောက်မွှေးကတော့ မိမိလောက်တော့မသန် ခပ် ပါးပါးပင်ရှိသေးသည်။ ကြည်ကြည် ကေဇင့်စောက်ပတ်လေးထဲ မောင်လေးဟာကြီးထည့်နေတာတွေးရင်း သူ့ပိပိထဲမှယားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ညရောက်လို့ မိုးပင်ချုပ်သွားပြီ မောင်လေးလည်း အခုထိပြန်မလာသေး၊ အိမ်ထဲမှာမနေရဲသည်မို့ ကြည်ကြည် အိမ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိသည်။ အဖေနဲ့အမေကတော့ ဟိုဖက်ရွာက ဒေါ်လေးဆုံးလို့ ညအိပ်သွားကြသည်။ ဒေါ်လေးဆိုတာကလည်း အိမ်ကိုခဏခဏအလည်လာအိပ်တတ်သူမို့ သရဲကြောက်သော ကြည်ကြည်ကျောချမ်းနေမိသည်။
““သေနာလေး….နင်ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလည်း….ဒီမှာကြောက်လို့သေတော့မယ် တကတည်းမှ မပြောလိုက်ချင်ဘူး”” ကြည်ကြည် ခြံတံခါးပိတ်ပြီးဝင်လာသော မောင်လေးမိုးထက်ကို ဆီးပြောလိုက် ပြီး မောင်လေးနောက်မှ အမြန်ပြေးလိုက်သွားတော့သည်။ ““ နင်ပါနဲ့ လာအိပ်….ငါတစ်ယောက်တည်းမအိပ်ရဲဘူး”” ““ အာ့ဆိုလည်း…..ဒေါ်လေးထွေးကိုခေါ်အိပ်ဟာ”” မိုးထက် မကေဇင်နှင့်မတွေ့ခဲ့ရ၍ ဒေါသဖြစ်နေသည်မို့ အစ်မဖြစ်သူကို သေသူဒေါ်လေးကို ခေါ်အိပ်ခိုင်းလိုက်သည်။
““ မိုးထက် သေနာလေး….နင် ငါကြောက်ပါတယ်ဆိုနေမှနော်”” ““ မသိဘူး ဒီမှာဒေါသဖြစ်နေတာ သိလား….မမ နင့်သူငယ်ချင်းမလာဘူး”” ““အယ်…..ငါနဲ့သေချာပြောထားပြီးသားပါ”” ““ သူ့အမေမူးလဲနေလို့ဆိုပြီး ပြောခိုင်းလိုက်တယ်”” ကြည်ကြည် မောင်လေးမိုးထက် အိပ်ယာဖက်ရောက်လာပြီး ““ အေးပါ မောင်လေးရယ်….ဒါကတော့လည်း သူ့အမေကိစ္စဖြစ်လို့ပါလေ”” မိုးထက် လိင်ချောင်းကြီးကွဲထွက်မတတ်နာကြင်လာပြီး ဂွေးဥများပါအောင့်အောင့်လာသည်။ လက်က သူ့လုံချည်ထဲကနေ သူ့ဟာကို ကိုင်ထားနေရသည်။ ကြည်ကြည် မောင်ဖြစ်သူ မျက်နှာရှုံ့မဲ့နေတာ ကိုကြည့်ပြီး နင် ဘာဖြစ်နေတာလည်း မောင်လေး လို့မေးလိုက်သည်။ ““ မမ မောင်လေး ဟိုဟာကြီး နာနေလို့…..
အားးးးး”” ““ ဟယ်….မောင်လေးရယ်”” ကြည်ကြည် ကြားဖူးထားသည့် ဒီဟာလူးပြီး မိန်းမနှင့်မနေရရင် ကွဲထွက်ပြီးသေတတ်တယ်ဆိုတာကို ပြန်သတိရလိုက်ပြီး….. ကြည်ကြည် မောင်လေးမိုးထက်ကိုကြည့်ပြီး စိုးရိမ်ကြီးစွာ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရတော့မည်မသိအောင်ဖြစ်နေမိသည်။ နန်းလုံးကြိုင်မြစ်လူးထားသော မိုးထက်လီးကြီးက အဆမတန်ထွားကြိုင်းပြီး တင်းကားနေသည်။ ဂွေးဥနှစ်လုံးကလည်း တအားအောင့်ပြီး အံကြိတ်ခါ ““ အား….အား… မမ….အား….နာလိုက်တာ မမရယ်”” မိုးထက် လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှဆုပ်ကိုင်ပြီး ကွေးကွေးကြီး အော်နေမိ သည်။ ကြည်ကြည် မောင်လေးအိပ်ယာဘေးမှကြည့်ရင်း ““ ပြစမ်း…..မမကိုပြစမ်း…..နင်ကလည်းနော် ငါတော့သေတာ သေချင်တော့တာပဲ”” ကြည်ကြည် မောင်လေးလက်ကိုဆွဲဖယ်ပေမယ့် မိုးထက်က အစ်မဖြစ်သူကို မပြရဲတာမို့အတင်းပဲ လက်ကိုအုပ်ထားမိသည်။
““ နင်သေလိမ့်မယ် မိုးထက်ရဲ့…..နင် အဲဒီအမြစ်လူးထားပြီး မိန်းမနဲ့မနေရရင် ကွဲထွက်သေမှာ ငါတော့စိတ်ညစ်ပါတယ် မိုးထက်ရယ်”” ““ ဟား….ငါ ငါရှက်တယ် မမရဲ့”” ““ ကဲ ဖယ်စမ်းပါ…..နင်သေလိမ့်မယ်…. ငါ့လက်နဲ့လုပ်ပေးမယ်….လက်ဖယ်လိုက်”” မမကြည်ကြည် မောင်ဖြစ်သူမိုးထက်၏ ဒူးကိုဆွဲခွာပြီး လက်ကိုဖယ်လိုက်တော့ မောင်ဖြစ်သူ၏ လိင်တန်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ တင်းပြောင်တောင်ကားနေသော မောင်လေးလိင်ချောင်းကြီးက ဘီယာဗူးနီးပါးတုတ်ပြီး လက်နှစ်ဆုပ်ကျော်နေသည်။ ဒစ်ဖူးကြီးမှာလည်း ကျီးအာသီးကြီးတပ်ထားသလိုမြင်လိုက်ရပြီး ကြည်ကြည့်ခမျာကြက်သီးမွှေးညှင်းများထလာသည်။ ““ မိုးထက်ရယ် နင်တော်တော်ဒုက္ခပေးပါလား ဟင်”” ““ မမပဲ စပေးတာလေ….အား….ကွတ်”” နင် မျက်စိမှိတ်ထား ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့နော်။ ကြည်ကြည် မောင်ဖြစ်သူမိုးထက်အပေါ် လုံချည်ကိုမလိုက်ခါ ကားယားခွလိုက်သည်။ အူတွေအလိပ်လိုက်တက်လာသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ကိုယ်မွှေးတဲ့မီး ကိုယ့်ပြန်လောင်တော့မည် မိမိစိတ်ထလို့ဖြစ်ပေါ်ချိန်တော် လက်ညိုးလေးအကုန်မထည့်နိုင်ပဲ စောက်စိလေးပွတ် အာသာဖြေခဲ့မိသည်။ အခုတော့ မောင်အရင်းရဲ့အဆမတန်လီးကြီးကို မိမိစောက်ရည် နှင့် သူ့လရည်ထွက်လာသည်အထိ လိုးပေးရတော့မည်။ နို့မို့ဆို မောင်လေးလီးကြီးကွဲထွက်သေရတော့မည်။
လူကြားလို့လည်းမသင့်တော်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကြည်ကြည် မောင်လေးလီးကြီးကိုကိုင်ပြီး သူ့စောက်ပတ်အ၀လေးကိုစတေ့နေပြီ ဒစ်ဖူးကြီးက အရည်ကြည်တွေနှင့်အတူ မိမိစောက်ပတ်ကအရည်ကြည်များပါစိမ့်ထွက်လာသည်မို့ မောင်လေးဒစ်ဖူးက ၀င်လုဝင်ချင်ဖြစ်နေပြီ။ ကြည်ကြည် အသါး တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာသည် ဒူးနဲ့ခြေသလုံးတွေညောင်းလာသည် မျက်စိကိုစုံမှိတ်လိုက်ပြီး လီးကြီးအပေါ်မှထိုင်ချလိုက်တော့သည်။
““ ဗျစ်….ဗျစ်……ပလွတ်….ဗြွတ်…..”” ““ အား…..အမေ့……အမလေး…..ဟင်း…..အဟင့်….သေပြီ”” ““ အား…..မမ…..အား….အင့်…..မမ….အား…”” ကြည်ကြည့်ဖင်နှင့် အောက်က မောင်လေး၏ပေါင်သားတို့ဖိကပ်သွားသည်။ မိမိစောက်ဖုတ်ကြီးကွဲပြဲသွားပြီဆိုတာကို သိလိုက်ရသည်။ နာကြင်မှုဒါဏ်ကြောင့် မျက်ဝန်းမှမျက်ရည်များစီးကြလာသည် မောင်လေးလီးကြီးက စောက်ပတ်လေးထဲ သပ်ကြီးလျိုထားသလိုအဆုံးထိဝင်လာလေတော့သည်။ အပျိုမြှေးကို လီးဒစ်ကြီးကထိုးဖြဲလိုက်ပြီး သားအိမ်နံရံကိုထိနေတာမို့ ကြည်ကြည့်ဗိုက်ထဲချက်တိုင်ခြေ ထိအောင် အောင့်နေသလိုခံစားနေရသည်။ မိုးထက်စိတ်ကို ထိန်းမထားနိုင်တော့သည်မို့ အစ်မဖြစ်သူကိုယ်လုံးကြီးကို ဆွဲလှည့်ယူလိုက်ပြီး သူကအပေါ်ရောက်လာသည်။ ကြည်ကြည့်စောက်ပတ်ထဲ ၀င်နေတဲ့ မောင်လေးလီးကြီးက မိမိကိုဆွဲလှဲလိုက်သည်မို့ စောက်ပတ်ထဲ လီးကကန့်လန့်ခံသွားပြီး ပိုပြဲသွားကာ မျက်ရည်များပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာတော့သည်။ အခုမှတော့ မောင်လေးအသက်နှင့် မိမိစောက်ပတ်လဲရတော့မည်ဟု အံကိုကြိတ်ခါ အားတင်းပစ်လိုက်တော့လေသည်။ မိုးထက်လည်း အစ်မဖြစ်သူစောက်ပတ်လေးကို ဆက်တိုက်ပင် စိတ်ရှိလက်ရှိပစ်ပစ်ဆောင့်လိုး ပစ်လိုက်တော့သည်။ အစ်မဖြစ်သူ၏ စောက်ပတ်နှင့် သူ့လီးကြားမှ သွေးများဒလဟောထွက်ကျလာ သည်။
မမကြည်ကြည် မျက်နှာလေးကားရှုံ့မဲ့ကာ မျက်ရည်များစိုရွှဲနေသည်။ မိုးထက်လည်း အစ်မဖြစ်သူဖင်တုန်ကြီးကို အောက်ကနေမမပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ ဖိဖိလိုးပစ်လိုက်သည်။ ““အား…..အား……အမလေး….သေပါပြီ…..အဟင့်”” ““ အင့်…..အင့်…. ကောင်းလိုက်တာမမရယ်…..အား….အား….”” ““ နာ..နာတယ်….မောင်လေး…ဖြည်းဖြည်း…..အင့်…အဟင့်”” မိုးထက်အချက်ပေါင်းများစွာစောင့်စောင့်လိုးလိုက်ပြီး လရည်များကို သူ့အစ်မစောက်ပတ်ထဲပန်းထဲလိုက်တော့သည်။ လီးရည်များ မိမိသားအိမ်ထဲကို ပန်းထည့်လိုက်သည်နှင့် မမကြည်ကြည်စောက်ပတ် ထဲမှ စောက်ရည်များလည်း ဒလဟောထွက်ကြလာတော့သည်။ ကြည်ကြည် မောင်ဖြစ်သူတင်သားကြီးကို အောက်ကနေဖက်ထားနေမိသည်။ မိမိစောက်ပတ်ထဲတွင်တော့ မောင်အရင်း၏လီးရည်နှင့် မိမိ၏စောက်ရည်တို့ပေါင်းဆုံပြီး နန်းလုံးကြိုင်မြစ်၏ဆေးအာနိသင်တို့ကိုချေဖျက်ပေးနေမိတော့သည်။